China waya waya nrapado teepu rụpụta na Factory | Jiashun
A na-eji akwa eriri iko mee ihe dị ka ihe bụ isi, nke a na-etinye ya na waya nchara nchara. Steelfọdụ ígwè waya ákwà ntekwasa na silicone roba mkpuchi, polyurethane mkpuchi, graphite mkpuchi, vermiculite mkpuchi, wdg ọ na-mere nke elu-okpomọkụ ọkụ na-eguzogide eriri ákwà, mejupụtara na-abụghị na-egbu egbu elu-okpomọkụ nrapado na titanium ntụ ntụ na-ekpo ọkụ ịpị.
A na-eji akwa eriri iko mee ihe dị ka ihe bụ isi, nke a na-etinye ya na waya nchara nchara. Steelfọdụ ígwè waya ákwà ntekwasa na silicone roba mkpuchi, polyurethane mkpuchi, graphite mkpuchi, vermiculite mkpuchi, wdg ọ na-mere nke elu-okpomọkụ ọkụ na-eguzogide eriri ákwà, mejupụtara na-abụghị na-egbu egbu elu-okpomọkụ nrapado na titanium ntụ ntụ na-ekpo ọkụ ịpị. Emere mkpuchi ndị a iji mee ka ike nke akwa a na-ere ọkụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eguzogide ọkụ, na-eguzogide akwa, na-eyi akwa na-eguzogide ma na-emebi. Dị ka dị iche iche were gburugburu ebe obibi, ị nwere ike họrọ iko eriri mesikwuru ígwè waya ákwà enweghị ihe ọ bụla mkpuchi, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ nchara waya ákwà na mkpuchi, na ndị a anzhidun nwere ike izute gị mkpa. Anzhidun si iko eriri mesikwuru ígwè waya ákwà nwere ndị na-esonụ e ji mara: ezi ọkụ na-eguzogide na okpomọkụ mkpuchi arụmọrụ. Good chemical corrosion eguzogide, mmanụ na-eguzogide na waterproof. Resistanceka nká, arụ ọrụ dị mma n’èzí, ndụ ruo 10 afọ. High ike, mgbapu eguzogide ọgwụ, akwa-eguzogide ọgwụ. Ezigbo ọkụ ọkụ, ire ọkụ ọkụ. Enweghị mgbakasị anụ ahụ, enweghị ịpị aka.
Anwụrụ ọkụ ákwà mgbochi, ákwà mgbochi ọkụ, blanketị ọkụ, ịgbado ọkụ blanket, ọkụ blanket, ọkụ bọọdụ, ọkụ akpa. Mgbanwe njikọ metal akpụkpọ, mgbanwe mmeba nkwonkwo na compensator. Kwes echebe ákwà, kwes mkpuchi ihe maka n'ekwú ọkụ ụlọ ọrụ. Mkpuchi mkpuchi na mkpuchi mkpuchi. Mkpuchi mgbochi nke ime na mpụga nke pipeline. Ọzọ mkpuchi mkpuchi usoro. High okpomọkụ ebu belt
Ihe gafere site na asambodo ruru eru nke mba wee nata nke ọma na ụlọ ọrụ anyị. Ndị ọrụ injinia ọkachamara anyị ga - adị njikere ijere gị ozi maka ndụmọdụ na nzaghachi. Anyị nwere ike ịnapụta gị ihe nlele na-enweghị ego iji zute nkọwa gị. Eleghị anya a ga-emepụta mbọ dị mma iji nye gị ọrụ na uru kacha baa uru. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ụlọ ọrụ anyị na ngwọta, biko kpọtụrụ anyị site na izipu anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị ozugbo. Inwe ike ịmata azịza na ngwa ahịa anyị. ọzọ, ị ga-enwe ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị iji hụ ya. Anyị ga-anabatakarị ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile na ụlọ ọrụ anyị. iru azụmahịa enterprise. mmekọrịta anyị na anyị. Biko nweere onwe gị ịgwa anyị maka nzukọ. nd anyị kwenyere na anyị ga-ekerịta ahụmịhe kacha mma bara uru na ndị ahịa anyị niile.
Nke gara aga: Fluororubber akwa
Osote: Fire shutter